Sida Loo Bilaabo YouTube Channel | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida loo bilaabo kanaalka YouTube
Sida loo bilaabo kanaalka YouTube
Haddi ay tahay muuqaalada bisadaha qosolka leh, hagaajinta sida loo sameeyo, baahinta tooska ah ee kanaalka ciyaaraha aad jeceshahay, ama Carpool Karaoke ee u dambeeyay, waxay u badan tahay inaad daawatay fiidyow YouTube ah - ama dhawr - maanta. Dhab ahaantii, goobtu waxay ku faantaa isticmaalka in ka badan laba bilyan - ku dhawaad ​​saddex-meelood meel oo internetka ah!
Waxaa la asaasay 2005tii garaash xafiis, YouTube waxa ay u kortay behemoth toos ah, oo ka soo horjeeda aaladaha bulshada ee casriga ah iyo raacitaanka Google sida mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn iyo mareegta labaad ee loogu booqashada badan yahay. Waxay ku socotaa 80 luqadood waxayna aragtaa boqolaal saacadood oo muuqaal ah oo la soo galiyay mid kasta daqiiqadii.
Xitaa haddii aadan ahayn Chewbacca Mom ama Justin Bieber (oo leh YouTube si uu ugu mahadceliyo guushiisa mega-ga ah), goobta wadaagga fiidyaha waxay noqon kartaa hab aad u caqli badan oo lagu abuuro oo laga faa'iidaysto nuxur kor u qaadaya oo dhiseysa wacyiga astaantaada.
Waxaan aadi doonnaa ilaa iyo inta aan sheegno in ganacsiyada, YouTube waa ganacsi culus.
Laakin ka hor inta aanad garaacin rikoodhada, la tasho hagahan tillaabo-tallaabo ah si aad u bilowdo kanaalka YouTube; Waxaan daboolnaa wax walba laga bilaabo qalabka ilaa ka-qaybgalka ilaa lacag-ururinta.
Diyaar ma u tahay inaad noqoto xiddig (fiidiyow)? Akhriso.
Ka dhig DreamHost lammaanahaaga YouTube
Waxaan hubin doonnaa in mareegahaagu yahay mid degdeg ah, ammaan ah, oo had iyo jeer kor u kacay si ay booqdayaashaadu kugu kalsoonaadaan. Qorshayaashu waxay ka bilowdaan $2.59/bishii.
Waa maxay sababta loo sameeyo kanaalka YouTube?
Waan ognahay in aad hadda kubbado badan hawada ku jirtay, iyo abuurista iyo maaraynta waxa ku jira kanaalka YouTube-ka waxa ay u egtahay badan si aad ugu darto saxankaaga hore u buuxa. Haddaba aan ka hadalno sababta kanaalka YouTube uu faa'iido ugu leeyahay ganacsigaaga.
Iyada oo koboceeda baaxadda leh iyo joogsigeeda xoogga badan ee mid ka mid ah mareegaha ugu ganacsiga badan, YouTube waxay siisaa summadaha fursad ay kor ugu qaadaan muuqaalkooda marka ay ka dhigayaan joogitaan goobta.
Macluumaadka halkaas lagu wadaago ayaa si weyn u saameeya go'aamada iibka macaamiisha: 68% isticmaalayaasha YouTube daawaday muuqaal si uu uga caawiyo inay go'aan iibsadaan, iyo a intooda badan waxay samaynayaan bilawga safarkooda wax iibsiga. Waxa suurtogal ah in macluumaadkaagu isticmaalo badan saamayn ku leh.
Intaa waxaa dheer, YouTube waxay si wax ku ool ah u geli kartaa daawadayaashaada. YouTube ayaa gaadhay in ka badan 18-sano 49 da ' Si ka duwan shabakad kasta oo baahinta ama fiilada TV-ga ah iyo faallooyinka mid ka mid billion muuqaalka muuqaalka maalintii. Afar jeer in ka badan dadka ayaa doorbida daawashada fiidiyowga YouTube marka loo eego aaladaha warbaahinta bulshada, waxayna sameynayaan waqti dheer - celceliska fadhiyada daawashada mobilada waxay qaadataa in ka badan 40 daqiiqo.
Relacionado: Miyay tahay inaad la-hawlgasho saameyne si aad u horumariso boggaaga?
Xitaa caannimada YouTube, kaliya 9% ganacsiyada yaryar waxay bilaabeen kanaalo u gaar ah. Sida isticmaalku u sii kordhayo, waxaa weli jirta fursad aan si weyn loo faa'iidaysan ee ganacsiyada si ay u gaadhaan ugana qaybgalaan daawadayaasha fiidiyowyada YouTube.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira karti ay abuurayaashu lacag uga samayn karaan YouTube, iyaga oo kasbanaya nolol maalmeed iyaga oo samaynaya muuqaallo xiiso leh. YouTuber Dunida Ryan Waxa uu si weyn u soo xareeyay kanaalkiisa - oo leh 24.7 milyan oo macaamiil ah oo sameeya $ 26 million sannadkii. Miyaan sheegnay inuu siddeed jir yahay?
Waa markii aad ganacsigaaga kor u qaadi lahayd oo aad ka shaqayn lahayd YouTube. Waa kuwan tillaabooyinka
Sida loo bilaabo kanaalka YouTube (12 tillaabo)
1. Aqoonso bartilmaameedkaaga
Aan wax yar qaadanno si aan eber u gelino cidda (iyo waxa) bartilmaameedkaagu yahay. Samee qaar ka mid ah dadka farsamada-daawashada goobtaada oo ka fiirso cidda aad isku deyeyso inaad soo jiidato. Ka fakar su'aalaha soo socda markaad aqoonsanayso goobta gaarka ah ee ganacsigaagu ka shaqeeyo.
Waa maxay nooca/niche-kaaga gudaha warshadahaas?
Yaa ka kooban dhagaystayaashaada bartilmaameedka ah? Waa maxay sababta?
Maxay rabaan oo ay u baahan yihiin dhageystayaasha bartilmaameedkaagu?
Dhibaato noocee ah ama dhibco xanuun oo aad isku dayeyso inaad yareyso?
Jawaabaha su'aalahan waxay kaa caawin karaan inaad fahamto cidda aad rabto inaad ku habboonaato macluumaadkaaga - iyo nooca macluumaadka aad rabto inaad abuurto.
2. Samee Noocaada Nuxurka
Abuuritaanka kanaalka YouTube waa fursad aad u fiican ganacsigaaga si uu u kordhiyo muuqaalka. Markaa haysashada nooca saxda ah ee nuxurka ee ku habboon dhagaystayaashaada ayaa lama huraan u ah ka-qaybgalka iyo samaynta summada.
Markaad qeexdo cidda ay yihiin dhagaystayaasha aad beegsanayso, waxaad bilaabi kartaa inaad aqoonsato nooca nuxurka iyaga la jaan qaadi doona oo dabooli doona baahiyahooda.
Hana ku cadaadin inaad haysato nooc wax soo saar muuqaal ah oo heer Hollywood ah marka aad abuurayso nuxur. Mar dambe ayaan ka hadli doonaa qalabka (eeg tillaabada 4), laakiin hadda, xasuusnoow daawadayaasha, ku habboonaanta danahooda gaarka ah ayaa ka muhiimsan marka loo eego qiimaha wax soo saarka. Nuxurka ugu qiimaha badan ee dhagaystayaashu maahan nuxurka ay taageerto miisaaniyad weyn ama farsamo qaali ah.
Dhab ahaantii, YouTube ayaa leh 60% dadka daawaday muuqaalada goobta maalintii la soo dhaafay oo la jaanqaadaya nuxurka la xidhiidha danahooda gaarka ah.
Sida cad, ganacsiyada aqoonsaday dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah - oo tilmaamay waxa ay baahidoodu yihiin - waxay aad ugu guulaysan doonaan, kaliya maaha inay dhisaan joogitaanka YouTube laakiin sidoo kale inay gaadhaan ka-qaybgalka iyo dhisidda sumaddooda.
Iyada oo ku saleysan caadooyinkaaga YouTube, waxaad ogtahay inay jiraan noocyo badan oo kala duwan oo ka kooban fiidiyowyo. Halkan waxaa ah liis muunad ah si aad u hesho casiirka ka kooban yahay socodka Ka fakar sida aad ula qabsan karto si aad u daboosho baahiyaha dhagaystayaashaada, iyo wax walba oo ka sarreeya, sida aad u bixin karto qiimo.
Sidee-Tos/Nuxurka Waxbarasho (baaritaannada YouTube-ka waxa ay korayaan 70% sannadkii!)
Meesha ugu sarreysa
S & Sida
Casharrada ( isticmaalayaashu waa saddex jeer ka badan tahay inaad door bidayso daawashada fiidyowga waxbarida ee YouTube intii aad akhrin lahayd tilmaamaha badeecada)
Majaajilo ("nasasho" iyo "dareen maaweelo" ayaa ah labada sababood ee ugu sarreeya Liiska booqdayaasha ee daawashada waxa ku jira YouTube)
(Oo xusuusnow inaad ka dhigto macluumaadkaaga mid la jaan qaadaya cusbooneysiinta Tilmaamaha COPPA.)
Relacionado: Facebook, Twitter, Pinterest? U dooro habka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee ganacsigaaga
3. Sida loo Sameeyo Channel
Hadda, aan qodno tafaasiisha farsamada - sida loo sameeyo kanaalka YouTube.
Marka hore, samee Akoonka Google-ka, haddii aanad horeba mid u lahayn. Kani waa koontada aad isticmaali doonto si aad u maamusho akoonkaaga Brand-ka ee kala duwan - taasoo la macno ah, waxaad ka dhex rogi kartaa kanaalada kala duwan hal akoon oo YouTube ah.
Markaad abuurayso kanaal cusub, waxaa lagugu soo jeedin doonaa inaad samaysato Koontada Calaamadaha. Magac u bixi.
Kanaalkaagii waa la dejiyay! Fudud, haa? Hadda, qaybta madadaalada: habeynta.
Wax ka beddel oo soo rar summadaada kanaalka, farshaxanka kanaalka, iyo sawir-gacmeedyada gaarka ah - kuwani waa dariiqooyin muuqaal oo muhiim ah oo lagu muujiyo astaantaada.
Click on the About tab si loogu daro sharaxaad kanaalka. Ka taxadar marka aad samaynayso koobitaankaaga, iska hubi inaad bixiso qoraal kooban laakiin si fiican u sharaxay ganacsigaaga, hadafkaaga, iyo alaabtaada ama adeegyadaada. Isticmaal ereyada muhiimka ah ee ka caawin doona baarayaasha YouTube inay ku helaan. Ku dar macluumaadka xiriirka laxiriira iyo isku xirka shabakadaha bulshada.
4. Ururinta Gearkaaga
Xitaa haddii aadan haysan qalab casri ah oo qurux badan, waxaad weli duubi kartaa fiidiyowyada YouTube-ka ee quruxda badan. Waa kuwan sida loogu isticmaalo $$ kaaga si aad u abuurto wax tusmayn ama DIY ku salaysan miisaaniyadaada.
camera. Iyada oo ku xidhan nooca nuxurka aad abuurayso, waxaad u baahan doontaa inaad maalgashato kamarad ku habboon baahiyahaaga. Tan waxaa ku jiri kara DSLR, kamarad wax qabad (sida GoPro), ama kamarad shabakadeed. Dabcan, waad isticmaali kartaa taleefankaaga haddii ay awood u leedahay inay duubto muuqaal HQ. Samee cilmi-baaris si aad u heshid ku habboon tignoolajiyadaada ugu fiican. Kahor intaanad duubin, hubi in dhammaan kamaradaha iyo baytariyada la dallacay oo ay diyaar yihiin.
Microphone. Waxaad u baahan tahay maqal wanaagsan marka lagu daro muuqaal wanaagsan. Makarafoon dibadda ah ayaa kaa caawin kara bixinta tayada maqalka hodanka ah si kor loogu qaado soosaarka fiidyowgaaga. Haddii daawadayaashu ay ku maqli waayaan, waxay si dhakhso ah u daadiyaan macluumaadkaaga (laga yaabo inay tahay tartame!)
Tripod. Tripod waa qalab la awoodi karo oo kaa caawinaya in muuqaallada fiidiyoogu ay ahaato mid joogto ah (ma rabto in daawadayaasha ay wareeraan!) Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ku habboon doorashadaada iyo dhaqdhaqaaqaaga kamarada, sidaas samee cilmi-baaristaada.
Laydhka. Haddii aad ku duubayso gudaha gudaha ama meelaha aan iftiinka lahayn, qalabka nalka ayaa kaa caawin kara bixinta jawi wanaagsan oo muuqaal ahaan u muuqda oo quruxsan oo cad.
Barnaamijka Editing Software. Marka aad duubto fiidyahaaga, waxaad u baahan tahay barnaamij kombuyuutar ah oo kaa caawinaya inaad wax ka beddesho oo aad u beddelato fiidyahaaga xidhmo habaysan oo si fiican u habaysan. Kumbuyuutarrada intooda badani waxay wataan qalab aasaasi ah, laakiin haddii aad leedahay waayo-aragnimo dheeraad ah oo aad rabto gambaleelka iyo foorida, tixgeli inaad u cusboonaysiiso software sida Adobe Elements.
5. Duubista Fiidiyowgaagii Koowaad
Iftiin, kamarad, ficil! Iyada oo dhammaan qalabyadaada la rakibay, waa waqtigii filimka la duubi lahaa. Waxay ku caawin kartaa diyaarinta loox sheeko Kahor intaadan filim samayn, si aad u ogaato waxaad rabto inaad ku daboosho fiidyaha iyo sawirada laga yaabo inaad u baahato. Naftaada waqti badan sii, oo duub waxyaabo ka badan inta aad u malaynayso inaad u baahan tahay - way kuu fududaan doontaa inaad dhex shaandhayso muuqaalo badan oo wanaagsan intii aad dib ugu noqon lahayd oo aad dib u duubi lahayd haddii aad wax ka tagtay.
Marka aad duubto sawiradaada, ku shub kombayutarka, oo wax ka beddel adigoo isticmaalaya software-kaaga. Markaad isku dubaridayso fiidyahaaga, dhawr tabo oo tafatir ah:
YouTube ayaa leh Maktabad maqal ah, kheyraad fantastik ah oo loogu talagalay muusig royalty-free oo aad ku isticmaali karto fiidiyowyadaada.
Sii furitaankaaga jillaab soo jiidasho leh. Iyada oo ay ka kooban tahay tiro badan oo laga dooran karo, booqdayaashu waxay u baahan yihiin sabab soo jiidasho leh -iyo joogtaynta - sabab ay ku daawadaan aad fiidiyowyo.
Diyaar ma u tahay inaad la wadaagto muuqaalkaaga la iftiimiyay adduunka? Si aad fiidyahaaga ugu dhejiso YouTube, booqo kanaalkaaga oo guji Ku dheji Video badhanka (ma seegi kartid!).
Waxa laga yaabaa inay wakhti qaadato in la soo geliyo goobta, markaa inta aad sugayso, qaado nasasho aad u qalma (waad ogtahay, ka hor inta aanad shaqada ku soo noqon oo aad faafiso warka ku saabsan muuqaalka-cusub ee YouTube-ka-spankin).
7. Hagaajin raadinta
Waxaad heshay kanaal cusub oo dhalaalaya iyo waxyaabo dilaa ah. Laakin haddii fiidyahaaga aan loo habeynin raadinta, ma heli doontid taraafikada aad u baahan tahay si aad u dhisto astaantaada iyo ganacsigaaga.
Si aad uga caawiso meelaynta macluumaadkaaga si loo helo darajooyin wanaagsan ee matoorada raadinta, isticmaal ereyada muhiimka ah. Ku dhis cinwaanada fiidyaha agagaarka ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah (ma jiraan ereyo-fure!) Taas oo ka caawin doonta booqdayaasha inay ku helaan. Raac si faahfaahsan oo xog leh oo si wanaagsan loo farsameeyey.
Relacionado: Qalabka SEO ee ugu sarreeya si aad ugu wanaajiso mareegahaaga guusha
8. Samee Jadwal - oo Joog Joogta ah
Vlogging ma aha arrin hal iyo la sameeyay. Macnaha, hal muuqaal oo wanaagsan oo lagu wadaago YouTube kuma filna kor u qaadista ganacsigaaga. Hubaal, waa bilow fiican. Laakiin haddii aad rabto in aad dhisto bulsho oo aad si wax ku ool ah u suuq geyso alaabtaada ama adeegyadaada, waxaad u baahan tahay inaad dejiso jadwal qoraal ah oo joogto ah si booqdayaashu ay si joogto ah ula falgalaan macluumaadka kanaalkaaga.
Samee jadwal macluumaad oo ku dheg.
Waxa kale oo aad muhiim u ah in la sameeyo qaab-dhismeedka kanaalkaaga. Halkii aad fiidiyowyada u soo gelin lahayd si aan leexleexad lahayn, samee urur u fudud oo dareen ku leh booqdayaasha si ay u dhex maraan. U qaybi waxyaabaha khuseeya qaybo si aad u abuurto qaab hagitaan, oo ka fiirso ku darista kanaalka kanaalka si aad u siiso daawadayaasha fikrad waxa ay ka heli doonaan boggaaga (iyo sababta ay kuugu raacayaan).
9. Isku dhafka kanaalkaaga
Si aad u faafiso gaadhistaada, ku xidh kanaalkaaga YouTube mareegahaaga iyo baraha bulshada, ku dhejinta fiidyaha iyo wadaagista xidhiidhada goobtaada oo dhan iyada oo qayb ka ah istaraatiijiyad suuqgeyneed.
Rachael Kay Albers oo ka tirsan RKA Ink waxay soo bandhigaysaa muuqaalada majaajilada ah ee sawir gacmeedka ganacsi sida qayb caan ah oo ka mid ah shabakadeeda, iyada oo ku martiqaadaysa booqdayaasha si ay ula falgalaan waxa ay ka kooban tahay qaybaha kala duwan.
10. La macaamil bulshadaada
Isticmaalayaal badan, YouTube runtii waxay noqonaysaa xarun bulsheed halkaas oo booqdayaashu ay u imanayaan inay ka qayb qaataan. Dhab ahaan, 70% Isticmaalayaal badan ayaa la falgalaya hal-abuurayaasha iyo kanaalada, taas oo ka dhigaysa lama huraan abuurayaasha nuxurka inay ku lug yeeshaan daawadayaasha.
Caadi ah, hal mar-intii ilaaliyeyaashu waxay awood u leeyihiin inay noqdaan kuwa jecel - haddii ganacsiyadu si wax ku ool ah ula xiriiri karaan iyaga. Sidee loo sameeyaa tan? Dhowr fikradood:
Ka jawaab faallooyinka
Ka raadso jawaab celin macaamiisha ama taageerayaasha nooca macluumaadka ay rabaan inay arkaan
La wadaag macluumaadka isticmaaluhu soo saaray
Ku biir oo la xiriir akoonnada kale
U soo saar waxyaabo tayo leh jadwal joogto ah
11. Maalgelinta Xayeysiiska
Xitaa ereyada muhiimka ah ee dilaaga ah iyo nuqul la hagaajiyay, waa inaad tixgelisaa Xayeysiinta YouTube si aad u kobciso kanaalkaaga YouTube oo aad kor ugu qaaddo gaadhista ganacsigaaga. Waxaan mar hore ka wada hadalnay fursadda uu YouTube bixiyo (xusuusnow kuwan balaayiin ee aragtida maalinlaha ah?), Markaa horumarinta olole saaxiibtinimo ku leh miisaaniyada waxay kaa caawin kartaa inaad hesho oo aad ku xidho dad badan oo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah xayeysiis si wanaagsan loo meeleeyay. Suuqgeynta YouTube runtii waa suuqgeyn caqli badan.
Ma rabtaa inaad lacag ka samayso YouTube?
Ku biir warsidahayada bilaha ah si aad u hesho talooyin iyo tabaha aad uga faa'iidaysato joogitaankaaga onlaynka ah!
12. Falanqee, Hagaajin, Ku celi
Sida cad, markaad ka shaqeyso inaad abuurto kanaal oo aad dhisto bulshadaada, waxaad heli doontaa waxyaabo shaqeeya - iyo waxyaabo aan shaqayn.
Hey, taasi waa qayb ka mid ah habka waxbarashada!
Hagaajin oo hagaaji hawlahaaga markaad koraan, sii wad inaad wanaajiso kaliya maadadaada, laakiin hababkaaga. YouTube Stubixiyay (oo hore u ahaan jiray Creator Studio) waa aalad qiimo leh oo kaa caawinaysa inaad maamusho kanaalkaaga oo aad gasho fikrado gaar ah oo kaa caawin doona inaad koraan. Falanqaynta xogta si aad u barato noocyada cinwaannada fiidyaha, dhererka, iyo noocyada nuxurka ee ugu guulaha badan. La soco falanqayntaada YouTube (wakhtiga daawashada gaar ahaan waa muhiim!) oo had iyo jeer raadi siyaabo aad ku horumariso.
Ilow internetka oo dilay xiddiga muuqaalka. Iyada oo la bilaabayo kanaalka YouTube, ganacsigaagu wuxuu ka faa'iidaysan karaa wadaaga fiidyowga si ay u abuurto nuxur iyo dhismo sumad. Waa markii la fuuli lahaa.
Waxaan daboolnay waxyaabaha soo geli kara ee abuurista kanaalka YouTube, wax kasta laga bilaabo xisaabaadka summada iyo falanqaynta ilaa qalabka farsamada iyo noocyada ka kooban yahay.
Markaad abuurto fiidiyowyo dilaa ah oo aad dhex geliso website-kaaga, ka fiirsada our qorshayaasha martigelinta la wadaago. Waxaan xitaa bixinaa a plugin socdaalka website free, si aad si fudud ugu guurto DreamHost oo aad u sii wadato ka-qaybgalka YouTube-kaaga.
Beddel gidaarkaaga si aad ugu cusboonaysiiso shaashaddaada guriga ee iPhone iyo iPad [Pro tip]
Farsamada SEO ee Shopify: Hagaha tayaynta dukaankaaga makiinadaha raadinta